I-SEOmoz ikhupha uMama wazo zonke iiNkqubo ze-SEO | Martech Zone
Ndingumlandeli omkhulu weRandi Fishkin kwaye I-SEOmoz. Rhoqo ndiva ukumbombozela kwishishini lokuSebenzisa iiNjini zokuKhangela malunga ne-SEOmoz ukuba ichanekile okanye ayilunganga… kodwa andikazukubona umbutho omnye uqokelela izibonelelo ezininzi, iingcali, izixhobo kunye novavanyo ngokubhekisele kwi-SEO.
IRandi, ngokwakhe, sesinye isizathu sokuba ndiyithande i-SEOmoz. Kutshanje, xa ndifumene umkhwa omangalisayo ngenye yeesayithi zabaxumi bam kuwo amaphepha (ezigidi) zamaphepha, iRandi ithathe ixesha elithile emva komsebenzi ukuba ibe nepowwow nathi. Umamele ngomonde, wafundisa, kwaye wasinceda ukuba senze isicwangciso sovavanyo. Ukwaqinisekisile uninzi lwezikrokro zethu. Indoda entle engazicingeliyo! Ndiyilungu le-PRO kwaye akazange athandabuze ukunceda.
I-SEOmoz ngoku kuvavanywa i-beta iOrganic yokuKhangela isicelo seWebhu ukulandela umkhondo weenzame zakho zokwenza injini yokukhangela. Kwixesha elidlulileyo, abafana be-SEO njengam basebenzise indibaniselwano ye Izixhobo zeSEOmoz, Ii-webmasters, Uhlalutyo, iiLebhu zeGunya, SEO enkulu, yaye Semrush Ukulandela umkhondo wenani lezinto eziguquguqukayo:
Inqanaba lokhuphiswano -Ukujonga okhuphisana nabo ngezinto eziphilayo.
Inqanaba elingundoqo -Ukujonga igama lethu eliphambili kunye nokulandelela inkqubela phambili.
CTR kunye nokuGuqulwa -Ukubeka esweni amaxabiso okucofa amaphepha ethu kunye nokuguqulwa kweendwendwe kubathengi.
Backlinks -Ukujonga ukuba ngubani odibanisa nathi kunye namandla ezo ndawo.
Uvavanyo lweCrawl -Ukuhlalutya iphepha kunye nokwakhiwa kwesiza ukuqinisekisa ukuba umxholo uphuculwe kwiinjini zokukhangela.
I-SEOmoz iyaqhubeka ukugqitha kulindelo lwam njengesixhobo semfundo. Iividiyo zabo eziphambili zoqeqesho, izixhobo kunye nokugqwesa njengomboneleli ngenkonzo bayaqhubeka nokuphucula. Ukubhalisela I-SEOmoz unyaka kunye nokuya kumsitho omnye we-SEOmoz unokuhlawula izabelo kumbutho wakho. Ukuba uyiarhente ejonge ukwandisa umnikelo wakho woyilo kukhangelo, i-SEOmoz kufuneka.
Siyavuyisana neRandi kunye nombutho wayo ngolu longezelelo lumnandi. Ndijonge phambili ekuboneni ukusebenza okwandisiweyo kulo nyaka uzayo. Kwaye sele ndilanda umkhankaso wam wokuqala kuyo! Ukuba ungathanda ukuyibona isebenza, i-SEOmoz ineeWebinars ezininzi ezicwangciselwe usetyenziso lwePRO, Bhalisa ngoku.
tags: uphando lwezinto eziphilayoeziphilayo eziphilayoenjini yokukhangela nounSEOmoztoolsseomoz
Uthatha kancinci iMithombo yeendaba yeNtlalo
Epreli 17, 2012 ngo-1: 14 PM
ipholile, kodwa inexabiso njengesihogo…